Ku beddel midabka baarka xaaladda leh ColorBar | Wararka IPhone
ColorBar: u habee midabka baarka xaaladda ee ku yaal iPhone-kaaga (Cydia)
Mahadsanid Jailbreak Isticmaalayaasha iPhone waxay marin ka heli karaan xulashooyin badan oo habeyn ah oo Apple uusan ku shaqeyn nidaamka macruufka ee Apple. Iyada oo loo marayo Tweaks kala duwan oo ka muuqda dukaanka arjiga ee 'Cydia', isticmaaluhu wuxuu wax ka beddeli karaa qaybo badan oo ka mid ah nidaamka qalliinka sida mawduucyada muuqaalka ah, farta qoraalka, ama dabcan, u qaabeynta shaashadda qufulka si aan u jeclaano helitaanka iyo waxqabadyo badan our iPhone uusan haysan. Markan waxaan ka hadlaynaa Tweak for astaysto midabka baarka xaaladda qalabka, magaciisu waa BarBar waxayna kuu ogolaaneysaa inaad doorato midabka asalka ee barta wax lagu qoro iyo midabka astaamaha ka muuqda.
ColorBar wuxuu noo ogolaan doonaa oo keliya inaan u habeynno midabka baarka xaaladda shaashadda qufulka sida 'SpringBoard'Halkan waxaa ku imaanaysa khasaaro weyn oo Tweak ah oo aan kuu oggolaan doonin inaad ku xirto xaaladdan heerka codsiyada. Xusuusnow inay kuxirantahay midabada arjiga ee aan socodsiino, macruufka wuxuu ina tusayaa bar heer oo ku habboon midabadan si ay ugu ekaato si quruxsan. Si aad u habeysid barta xaaladda aaladda ColorBar waxaa ku jira astaanteeda qaabeynta ee Dejinta macruufka, halkaas ayaynu ka kala dooranaynaa labada midabka asalka sida midabka font si aan u jecel nahay. Si loo dalbado isbeddelada waxaan u baahan doonaa inaan sameyno a nasinta ilaa terminal-ka.
Tweak ColorBar waa gebi ahaanba gratuito waxaana lagala soo bixi karaa Cydia keydka BigBoss, Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada macruufka 7 illaa illaa hadda macruufka 7.1.2, haa, haddii aad rabto inaad sii hagaajiso nidaamka qalliinka waxaan kugula talineynaa inaad soo dejiso qaar ka mid ah lacagta kale ee lacagta lagu bixiyo sida Gu'ga 3aad, taas oo ku dari doonta ikhtiyaarro habeyn badan oo lacag yar ah.
Ma soo degsatay ColorBar? Sidee u aragtaa Tweak-kan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » ColorBar: u habee midabka baarka xaaladda ee ku yaal iPhone-kaaga (Cydia)
Soodeji Links-ka iOS 8 Beta 4